Waa Maxay Qiimeynta Kicitaanku? Sideed Ku Hormarin Kartaa Heerkaaga Soo Kordhin? | Martech Zone
Heerka soo-kabashada waa mid ka mid ah kuwa KPI-yada ee suuqleyda dijitaalka ahi ay waqti badan ku bixiyaan falanqaynta iyo isku dayga inay horumariyaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan si buuxda u fahmin waxa soo kicintu tahay, waxaa laga yaabaa inaad khalad ku sameyso sida aad isugu deyeyso inaad u horumariso. Waxaan ku dhex mari doonaa qeexida sicirka boodboodka, xoogaa yar, iyo siyaabo aad ku horumarin kartid heerkaaga soo kabashada.
Qeexida Heerka Qiyaasta
A ka soo kabtaan waa fadhi hal bog ah oo ka socda boggaaga. Falanqaynta, dib u soo kabashada waxaa loo xisaabiyaa si gaar ah kalfadhi kiciya kaliya hal codsi oo loogu talagalay serverka 'Analytics', sida marka isticmaale uu furo hal bog oo ka mid ah boggaaga ka dibna uu ka baxo iyada oo aan la kicin wax codsiyo kale ah serverka Analytics inta lagu jiro kulankaas.
Si aan si sax ah u cabbirno heerka soo-kabashada, waa inaan qaadnaa wadarta tirada bounnada oo aan ka goynaa booqashooyinka tixraaca ee ka imanaya bogga websaydhka shirkadda. Marka - aan ku dhex socono dhacdooyin kacdoonno ah:
Soo-booqde ayaa ku soo degaya boostada, ma xiiseynayo waxa ku jira, oo wuxuu ka tagayaa boggaaga. Taasi waa boodbood.
Soo-booqde ayaa ku soo degaya bogga soo degitaanka ka dib riixaya wicitaanka-ficilka si loo diiwaangaliyo arjigaaga. Taasi waxay ku qaadataa iyaga barta dibedda ee subdomain ama domain ka duwan oo ka shaqeeya xisaabaadka kala duwan ee Google Analytics. Taasi waa boodbood.
Soo booqde ayaa ku degay maqaal ka yimid natiijo goobis halkaas oo boggaagu aad u sarreeyo… muddo aan ku habboonayn badeecadaada ama adeegyadaada. Waxay garaaceen badhanka dambe ee biraawsarkooda si ay ugu noqdaan natiijooyinka raadinta. Taasi waa boodbood.
Dhacdooyinka Waxay Ka Dhigi Karaan Heerarka Soo Kordhinta Eber
Qiyaasta soo-kabashada ayaa guud ahaan loo arkaa inay tahay cabir tilmaam u ah booqdaha markii ugu horreysay hawlgelinta bogga… laakiin waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso. Waa kuwan dhacdo laga yaabo inaad kaa yaabiso:
Adigu waxaad sameysaa falanqeyn dhacdo bogga… sida batoonka ciyaarta oo la riixayo, dhacdooyinka is rog-roga, ama soo-bax popup ah oo dhacaya.
Dhacdo, haddii aan lagu cayimin a dhacdo is-dhexgal la'aan, farsamo ahaan hawlgelinta. Suuqgeyaashu waxay badanaa ku daraan dhacdooyinka bogagga si ay si dhow ula socdaan sida martidu ula falgaleyso walxaha ku jira bogga ama marka walxuhu ka muuqanayo bog. Dhacdooyinka waa hawlgelinta, markaa isla markiiba waxay arkayaan heerarka kacsiga oo hoos ugu dhacaya eber.
Heerka Soo-kabashada iyo Qiimaha Ka Bixitaanka
Ha isku khaldin Qiimaha Ka Bixidda iyo Qiimaha Bounce. Qiimaha bixitaanku wuxuu gaar u yahay hal bog oo bartaada ku yaal iyo haddii booqdehu ka tagay boggaas si uu u aado bog kale (goobta ama ka baxsan). Qiyaasta Bounce waxay gaar u tahay bogga ugu horeeya ee booqde uu ku dul fadhiisan doono kalfadhiga ay ku bilaabeen bartaada… iyo haddii ay ka tageen goobtaada booqashada ka dib.
Waa kuwan waxyaabo gaar ah oo u dhexeeya Qiimaha ka bixitaanka iyo Heerka Boogga bog gaar ah:
Dhammaan aragtiyada bogga ee bogga, Qiimaha ka bixitaanka waa boqolkiiba inta ay ahaayeen ee la soo dhaafay fadhiga.
Dhammaan kal-fadhiyada ku bilaabmaya bogga, Heerka Boogga waa boqolkiiba inta ay ahaayeen oo keliya mid ka mid ah fadhiga.
Heerka Boogga waayo bog wuxuu ku saleysan yahay oo keliya kal-fadhiyada ka bilaabmaya boggaas.
Hagaajinta Heerka Bounce wuxuu dhaawici karaa hawlgelinta
Suuqgeeyuhu wuxuu horumarin karaa sicirka boodboodaya wuxuuna baabi'in karaa kaqeybgalka goobtooda. Qiyaas qof soo galaya bogga boggaaga, oo akhrinaya dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay, iyo inaad qorshe la sameysid demo kooxdaada iibka ah. Waligood kuma riixin wax kale bogga… uun baa yimid, ka akhriyi astaamaha ama faa'iidooyinka, ka dibna emayl ugu soo celi iibiyaha.
Taasi waa farsamo ahaan a ka soo kabtaan… Laakiin runtii dhibaato ma ahayd? Maya, dabcan maya. Taasi waa hawlgal fantastik ah! Waa uun in qaar ka mid ahi ay ka dhaceen meel ka baxsan awoodda falanqaynta si ay u qabtaan dhacdada.
Daabacayaasha qaarkood waxay si farshaxan ahaan hoos ugu dhigaan sicirka boodhka si ay ugu fiicnaadaan xayeysiistayaasha iyo kafaala qaadayaasha. Waxay tan ku sameeyaan iyagoo u kala qaadaya waxyaabaha ku jira bogag badan. Haddii qofku ay tahay inuu gujiyo illaa 6 bog si uu u akhriyo maqaal dhan, waxaad ku guuleysatay inaad hoos u dhigto heerkaaga soo kabashada IYO kordhinta aragtidaada bogga. Mar labaad, tani waa xeelad lagu kordhinayo qiimayaashaada xayeysiis adiga oo aan qiime ama dadaal ku darin booqdahaaga ama xayeysiiyahaaga.
Farsamadan runti waa been abuur mana ku talinaayo… xayeysiistayaasha ama martidaada. Khibradda booqdahaaga waa in aan waligeed lagu go'aamin sicirka boodka oo keliya.
Hagaajinta Heerkaaga Soo kabashada
Haddii aad jeclaan lahayd inaad hoos u dhigto heerkaaga soo kabashada si wax ku ool ah, waxaa jira dhowr dariiqo oo aan kugula talin lahaa:
Qor waxyaabo sifiican loo abaabulay loona habeeyay oo laxiriira waxa ay dhagaystayaashaadu raadinayaan. U adeegso ereyada muhiimka ah si wax ku ool ah adoo samaynaya cilmi baaris ku saabsan waxa ereyada muhiimka ah ay tarayaan taraafikada bartaada, ka dibna ku isticmaal cinwaannada boggaaga, cinwaanada boostada, post-slugs, iyo waxyaabaha ku jira. Tani waxay hubin doontaa in makiinadaha raadinta ay si sax ah kuu tilmaamaan waxaadna u badnaan doontaa inaad booqdayaashu ku soo degto bartaada kuwaas oo aan xiiseyneynin isla markaana soo kabanaya.
Ka faa'iideyso xiriiriyeyaasha gudaha ee ku jira mawduucaaga. Haddii dhagaystayaashaadu u yimaadeen goobtaada raadinta gaar ah - laakiin nuxurka ma waafaqsana - haysashada xiriiriyeyaal qaarkood oo mowduucyada la xiriira waxay kaa caawin karaan inay sii hayaan akhristayaashaada. Waxaa laga yaabaa inaad rabto shax tusmayn leh calaamado ka caawiya dadka inay u boodaan mawduucyo gaar ah ama cinwaan hoosaadyo (riixista calaamaddu waa hawlgelin).
Si otomaatig ah u soo saar qoraallada la xiriira ee ku saleysan calaamadeynta ama ereyada muhiimka ah. Bloggeyga, waan adeegsadaa Jetpack ee laxiriirta Qoraalada muuqaalka oo waxay qabataa shaqo weyn oo ah bixinta liis gareyn dheeri ah oo dheeri ah oo laxiriira astaamaha aad u adeegsatay boostadaada hadda.
Isticmaalka Maareeyaha Google Tag Manager, si fudud ayaad u awoodi kartaa kiciya dhacdooyinka wareejinta bogga. Aynu wajahno user isticmaale dhex wareegaya bog waa hawlgelinta. Dabcan, waxaad ubaahantahay inaad sidoo kale kormeerto waqtigaaga goobtaada iyo guud ahaan qiyaasaha beddelida si loo hubiyo in waxqabadka uu faa'iido u leeyahay yoolalkaaga guud.
Ka-qaadista Boogaha oo ah Hawl-gal dhab ah
Xusuusnow xaaladdayda kore ee aan ku xusay in qof soo galay boggaaga, akhri bogga, ka dibna riix bogga dibedda si aad isu diiwaangeliso? Waxaad sameyn kartaa dhowr waxyaabood si aad u hubiso in tani aysan u diiwaangashanayn sidii boodboodkaaga boggaaga:
Ku laabo dhacdo guji xiriiriyaha. Ku darista dhacdo, hadda waad iska saartay soo kabashada markii booqdehu ku garaaco meesha aad jeclaan lahayd. Tan waxaa lagu sameyn karaa wac-guji ama xiriiriye-riix-emayl sidoo kale.
Kudar bogga leexinta udhaxeysa. Haddaan gujiyo diiwaan ka dibna ku degto bog kale oo gudaha ah oo dabagal ku sameeya isla markaana qofka u weeciya bogga dibedda, taas oo loo tirin doono sidii bog kale oo muuqaal ah oo aan ahayn soo kabasho.
La soco Isbeddellada Heerarkaaga Soo kabashada
Waxaan si weyn kugula talin lahaa inaad diirada saarto heerka boodka ee waqtiga kadib halkii aad ka walwalin laheyd tusaale halkan iyo halkaa ah. Adoo adeegsanaya farsamooyinka kor ku xusan, waad diiwaangelin kartaa isbeddelada ku dhaca gorfaynta ka dibna waxaad arki kartaa sida heerkaaga boodboodku u soo hagaagayo ama inuu uga sii darayo. Haddii aad kula xiriireyso daneeyayaasha heerka kor u kaca sida KPI, waxaan kugula talin lahaa inaad wax yar qabato howsha.
La socodsii heerka kobaca ee daneeyayaasha.
La xiriir sababta sicirka boodboodayaashu aysan u noqon tilmaam wanaagsan taariikh ahaan.
La socodsii isbeddel kasta oo la yaab leh oo ku saabsan heerka soo kabashada sida aad ugu darto dhacdooyinka bartaada si aad si fiican ugula socoto ka-qaybgalka.
La soco isbeddelka heerkaaga soo kabashada waqtiga oo sii wad ku habboonaanta qaab dhismeedkaaga, waxyaabaha ku jira, hagidda, wicitaan-ka-ficil, iyo dhacdooyinka.
Dulucda sheekada ayaa ah in aan doorbidayo in dadka soo booqda ay galaan bog, ayna helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin, oo ay ila qabtaan ama iga baxaan. Soo-booqdaha aan khuseynin ma ahan soo kabasho xun. Iyo booqde hawl-gala oo beddela isagoo aan waligiis ka bixin bogga ay ku sugan yihiin ma aha soo kabasho xun, sidoo kale. Falanqaynta heerka soo kabashada waxay u baahan tahay shaqo yar oo dheeri ah!
Tags: Analyticska soo kabtaanheerka cigtaAnalytics google
Nov 29, 2009 saacadu markay tahay 1:30 PM
Marnaba kuma fikirin inaan sameeyo wax la mid ah hababka khiyaanooyinka si aan u kordhiyo aragtida bogga. Waxaan leeyahay heer sare oo ka soo kabasho oo durba ku yaal barteyda maaddaama aysan aheyn walaac weyn waxaan u maleynayaa inaanan u baahnayn inaan ka fekero!
Sida ku saabsan hababka lagu taliyay, waxaan isticmaalayay qoraalada laxiriira qoraalada in mudo ah hada waana hubaal inay kordhineyso aragtida bogga. Ma aanan helin qaabkeyga ku xirnaanta isku xirnaanta weli.
Qoraalkaygii udambeeyay ee Khafiifinta Sirta Gabdhaha Slimka